Daniely 6 - Ny Baiboly
Daniely toko 6
Daniely tao an-davaky ny liona - Nialona an'i Daniely ireo solom-panjaka, ka niray tetika hamely azy tamin'i Dariosa; fanerena hivavaka amin'ny mpanjaka - Ny nandavan'i Daniely an'izany, sy ny nanamelohana azy; ny nanafahan'ny anjelin'ny Tompo azy - Ireo solom-panjaka, natsipy tao an-davaky ny liona, ary Dariosa nidera ny Andriamanitr'i Daniely.
1Ary ny fanjakana noraisin'i Dariosa, ilay Meda, izay efa tokony ho roa amby enimpolo taona ny andro niainany.
2Sitrak'i Dariosa ny hanendry solom-panjaka roapolo amby zato, hizarazarany ny fanjakana manontolo. 3Ary nisy mpanao raharaham-panjakana telo lahy, anisan'ireo Daniely, natao ambonin'izy ireo, ka tsy maintsy amoahan'ny solom-panjakana ny toe-draharaha, mba tsy hahafaty antoka ny mpanjaka. 4Nihoatra noho ny mpanao raharaham-panjakana ambony sy ny solom-panjaka rehetra anefa Daniely, fa nisy fanahy ambony tao aminy, ka nihevitra ny hanendry azy ho mpanapaka ny fanjakana manontolo ny mpanjaka. 5Noho izany, nitady izay hiampangana an'i Daniely ny amin'ny momba ny fanjakana, ireo mpanao raharaham-panjakana ambony sy solom-panjaka, nefa tsy nahita iray akory, na dia izay tsininy kely foana aza; fa marina izy, ka tsy nisy diso na tsiny akory taminy. 6Dia hoy ireo olona hoe: Tsy hahita izay hiampangana an'io Daniely io akory isika raha tsy amin'ny alalan'ny Andriamaniny no hahitantsika zavatra hiampangana azy. 7Izay ireo mpanao raharaham-panjakana ambony sy solom-panjaka ireo, dia nirodorodo nankany amin'ny mpanjaka, ka nanao taminy hoe: Ry Dariosa mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie hianao. 8Niray hevitra avokoa ny mpanao raharaham-panjakana ambony rehetra, ny masoivoho, ny solom-panjaka, ny mpanolo-tsaina, mbamin'ny governora, fa tokony hanao lalàm-panjakana sy hamoaka didy fa na zovy na zovy hanao fivavahana amin'andriamanitra, na amin'olombelona, afa-tsy aminao irery ihany, mandritra ny telopolo andro, dia hatsipy ao an-davaky ny liona. 9Koa ankehitriny, ry mpanjaka, avoahy ny didy, ary soraty ny lalàna, mba tsy ho azo ovana araka ny lalàn'ny Meda sy ny Persa tsy azo ovana. 10Koa dia nosoratan'i Dariosa mpanjaka tokoa izany didy aman-dalàna izany.
11Nony ren'i Daniely fa voasoratra ny didy dia lasa izy niditra tao an-tranony, izay nisy varavarankely mivoha manandrify an'i Jerosalema tao amin'ny efitra ambony. Nandohalika intelo isan'andro izy, nivavaka sy nidera an'Andriamanitra araka ny fanaony teo aloha. 12Tamin'izay ireo olona dia avy nirodorodo ka nahita an'i Daniely nivavaka sy niantso an'Andriamaniny; 13dia nanatona ny mpanjaka sy niteny taminy ny amin'ilay didim-panjakana izy ireo nanao hoe: Moa tsy nanoratra lalàna hianao fa na zovy na zovy mivavaka amin'andriamanitra na amin'olombelona, hafa-tsy aminao irery mandritra ny telopolo andro, ry mpanjaka, dia hatsipy ao an-davaky ny liona? Namaly ny mpanjaka nanao hoe: marina tokoa izany, araka ny lalàn'ny Meda sy ny Persa izay tsy azo ovana. 14Dia niteny indray izy ireo, ka nilaza teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: Daniely anankiray amin'ireo babo avy amin'i Jodà anefa, ry mpanjaka, namotsifotsy anao, sy ny didy nosoratanao; fa manao ny fivavahany intelo isan'andro. 15Nalahelo mafy ny mpanjaka nony nandre izany; raikitra tao am-pony ny hanafaka an'i Daniely, ka mandra-pilentiky ny masoandro izy, nitady hamonjy azy ihany. 16Fa nirodorodo nankao amin'ny mpanjaka ireo olona ireo, ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: Aoka ho fantatrao, ry mpanjaka ô, fa lalàn'ny Meda sy ny Persa ny tsy ahazoana manova ny didy aman-dalàna rehetra efa navoaky ny mpanjaka. 17Tamin'izay ny mpanjaka nanome teny hitondra an'i Daniely sy hanipy azy ao an-davaky ny liona. Niteny ny mpanjaka, ka nanao tamin'i Daniely hoe: Ny Andriamanitrao izay tompoinao mandrakariva anie, no hanafaka anao! 18Dia nalaina ny vato natampina ny vava lavaka, ka nasian'ny mpanjaka fitomboka tamin'ny fanombohan-kaseny sy ny fanombohan-kasen'ireo andriantompo-menakely, mba tsy hisy hovana ny amin'i Daniely.
19Avy eo ny mpanjaka dia nankany an-dapany tsy nitendry hanina mandritra ny alina, tsy nampiantso vehivavy ho eo aminy, ary lasa lavitra azy ny torimaso. 20Vao marainakoa ilay nangiran-dratsy iny ny andro dia niarina ny mpanjaka, ka nidodododo nankany an-davaky ny liona. 21Nony mby teo akaikin'ny lavaka izy, niantso an'i Daniely tamin'ny feo malahelo, ary niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniely hoe: Ry Daniely mpanompon'Andriamanitra velona ô, nahavonjy anao tamin'ny liona va ny Andriamanitrao tompoinao mandrakariva? 22Dia niteny tamin'ny mpanjaka Daniely: Ry mpanjaka ô, velona mandrakizay anie hianao! 23Ny Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona ka tsy naninona tsy naninona ahy akory ireo, satria hita fa tsy manan-tsiny teo anatrehany aho, sady tsy nanao ratsy teo anatrehanao koa aho, ry mpanjaka ô! 24Faly dia faly ny mpanjaka ny amin'i Daniely ka nasainy nesorina tao an-davaka Daniely. Dia nesorina tao an-davaka Daniely, ka tsy nisy ratra kely akory hita tao aminy, satria nino ny Andriamaniny izy. 25Fa mandidy kosa ny mpanjaka, ka ireo olona nilaza ratsy an'i Daniely dia nalaina ary natsipy tao an-davaky ny liona izy mbamin'ny vadiny aman-janany. Ka mbola tsy nipaka tamin'ny vody lavaka akory dia noraisan'ny liona, ary notapatapahany ny taolany rehetra.
26Tamin'izay Dariosa mpanjaka nanoratra ho any amin'ny foko amam-pirenena rehetra mbamin'ny samihafa fiteny, izay monina eto ambonin'ny tany nanao hoe: Hitombo fiadanana anie hianareo! 27Lalàna avoakako ny mba hatahorana sy hangovitan'ny olona eo anatrehan'Andriamanitr'i Daniely eran'ny fanjakako rehetra, fa izy no Andriamanitra velona, maharitra mandrakizay, ny fanjakany tsy mba ho rava, ary ny fanapahany tsy hanam-pahataperana. 28Manafaka sy mamonjy izy ary manao famantarana amam-pahagagana eny an-danitra sy etý an-tany. Izy no nanafaka an'i Daniely tamin'ny hohon'ny liona.
29Ary nambinina io Daniely io tamin'ny nanjakan'i Dariosa sy tamin'ny nanjakan'i Syrosa, ilay Persa. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0091 seconds